Ergo Eritrean iyo Itoobiyaan ah oo dooranaya Yaasiin Farey | KEYDMEDIA ONLINE
Ergo Eritrean iyo Itoobiyaan ah oo dooranaya Yaasiin Farey
Nabaddoonku, wuxuu ku baaqay in la joojiyo boobka kursiga, wuxuuna beesha leh, ugu baaqay in ay hor istaahaan dhaca uu Qoorqoor, ka wado Xarunta gobolka Galgaduud.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Cabasho xooggan ayaa ka taagan kursiga HOP067, kaas oo Famaajo iyo Qoorqoor ku heshiiyeen in ay u boobaan Yaasiin Farey oo ka mid ah eedeysanayaasha kiiska Ikraan Tahliil, oo ku maqan gacanta Taliskii Fahad Yaasiin.
Sida ay Keydmedia Online hore u baahisay, Qoorqoor ayaa Yaasiin Farey u boobaya Kusiga, wuxuuna jid-gooyo u dhigtay dhamaan musharixiinta rasmiga ahaa, kuwaas oo shir jaraa’id oo ay qabteen ku sheegay in laga hor istaagay safar ay ku tagi lahaayeen Dhuusamareeb.
Cornel Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare, wuxuu sheegay in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ay Dhuusamareeb ka dajiyeen, ciidamo isugu jira Soomaali, Itoobiyaan iyo Eritrean, si looga dhigo ergada kursiga loo boobayo eedeysane, Yaasiin Farey.
“Waxaan xogaha ugu danbeeya ku helnay in ergada kursiga dooraneysa ay ka mid yihiin askar itoobiyaan ah, maadaama laga shakiyay Soomaalidii kale, oo la yiri, birri ayay sheegayaan in ay doorteen kursi reer kale, warar kale, waxa ay sheegayaan in ergo Eritrean ah Dhuusamareeb la keenay”. Ayuu yiri Tuuyrare.
Wuxuu xaqiijiyay in nabaddoonadii saxda ahaa ee saxiixa kursiga HOP67 lahaa iyo xildhibaannadi u sharraxnaa, laga hor istaagay in ay u socdaalaan Caasimadda Galmudug, isla-markaana ay soo gaareen farriimo handadaad ah.
Tuuryare, oo soo qabtay xilka Agaasimaha Hay'adda Nabad-sugada iyo Sirdoonka Qaranka, oo ka mid ah musharixiinta kursigaan, ayaa si weyn kaga soo horjeeday, hannaanka ay siyaasadda dalka u qasayeen Kooxda Farmaajo, waxuuna bishii April ee sanadkaan ka badbaaday isku day khaarijin.
Nabaddoon, Cali Xasan Cali (Cali Jeesto), oo ah saxiixaha rasmiga ah ee kursiga, oo dhawan saxaafadda kula hadlay Muqdisho, ayaa sheegay in boobka kursiga ee ka socda Dhuusamareeb, ay dusha saaranayaan, Rooble, Qoorqoor iyo Guddiga Doorashada.
“Kursiga HOP67, akhayaartiisii, musharixiintiisii iyo saxiixihiisii, waxa ay ku sugan yihiin Mugdisho, waxa Dhuusamareeb jooga boob ayay wadaan, waxa ay ergada ka dhigayaanna waa askar, waxaa odayasha laga dhigayana waa dhallinyaro ee yaan lagu kadsoomin”. Ayuu yiri.
Fahad iyo Farmaajo oo doonaya in dhamaan eedeysanayaasha u adeegayay ay ku daraan baarlamaanka 11-aad ee JFS, si ay kaga gambadaan gacmaha sharciga.
Inta badan ergada dooranaysa kuraasta Baarlamaanka, ayaa sanadkaan wajigoodu qarsan yahay, waxaana la badelay magaca rasmiga ah ee xubnaha codeynaya.